I-FAQ - iWoopShop ®
Indlela Yokusesha Imikhiqizo?
Ungasesha imikhiqizo ngokufaka igama lomkhiqizo noma igama elingukhiye kwibha yokusesha phezulu kwekhasi. Zama ukufaka incazelo ejwayelekile. Amagama angukhiye angaphezulu oyisebenzisayo, imikhiqizo embalwa oyothola kukhasi lemiphumela. Ungakhetha isigaba ongasesha kuso.
Izindleko ze-Shipping zibalwa kanjani?
Singene WoopSop unikeze ukuthumela kwamahhala emhlabeni jikelele kumakhasimende ethu kuyo yonke imikhiqizo, woop woop!
Kuyini Umthengi Protection?
Ukuvikelwa komthengi kuyisitifiketi sokuqinisekisa ukuthi abathengi bathenge ngesibindi kuwebhusayithi yethu.
Wena wavikelwa kanjani ngesikhathi:
Into oyinikezile ayizange ifike esikhathini esithembisiwe.
Into namukela awuzange njengoba kuchazwe.
Into oyitholile eyayiqinisekiswa ukuthi iyinkohliso yangempela.